We.com.mm - ယိုးဒယား ကြာဇံသုပ် လေးသုပ်စားကြမယ်
ယိုးဒယား ကြာဇံသုပ် လေးသုပ်စားကြမယ်
ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ယိုးဒယားစာတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ WE မှအစားတစ်လိုင်းပရိသတ်တွေ အတွက် ကြာဇံသုပ် လုပ်နည်းလေးကို ပြောပြပေးပါ့မယ်။ လုပ်ရတာက လွယ်လွယ်လေးနော်။ နေ့လည်နေ့ခင်း ပိတ်ရက်တွေထဲမှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်း လုပ်စားလို့ရတယ်နော်။ ဒီတော့ ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ လုပ်နည်းလေးတွေကို ပြောပြပေးမယ်နော်။
၁. ပဲကြာဇံ ( ၁ ထုပ် )
၂. မှိုခြောက် (သို့မဟုတ်) ကြွက်နားရွက် ( အနည်းငယ် )
၃. ကြက်သား ( အနည်းငယ် )
၄. ကြက်သားမှုန့် ( အနည်းငယ် )
၅. ငံပြာရည် ( အနည်းငယ် )
၆. သံပုရာသီး ( ၁ လုံး )
၇. နှမ်းထောင်း ( အနည်းငယ် )
၈. ငရုပ်သီး အကျက်မှုန့် ( အနည်းငယ် )
၁. အရင်ဦးဆုံး ဂျုံ ကြာဇံကို ရေနွှေးဖျောပြီး ဆယ်လိုက်ပါ။ နူးတဲ့အထိ ရေနွှေးဖျောပါနော်။ ကြက်နားရွက်လေးတွေကိုလည်း ရေစိမ်ပြီး ညှပ်ထားပါ။
၂. ကြက်သားကို ဆား၊ အချိုမှုန့်နဲ့ နယ်ပြီး ပြုတ်ထားပါ။ ပြုတ်ပြီးရင် အတုံးသေးသေးလေးတွေ တုံးလိုက်ပါ။
၃. သုပ်မယ့် ဇလုံထဲသို့ ကြာဇံရယ်၊ ကြက်သားရယ်နဲ့ ကျန်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ထည့်ပြီး နယ်ပြီး သုပ်လိုက်ပါ။ ဆီလုံး၀ မသုံးပါဘူးနော်။ ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ဘာသာအလွယ်တကူ လုပ်စားလို့ရတဲ့ ယိုးဒယားကြာဇံသုပ်ကောင်းကောင်းကို စားလို့ရပါပြီနော်။
ငရုပ်သီးနှပ် ပူပူစပ်စပ်လေး ချက်စားကြမယ်
ပုဇွန်ဆိတ် အစိမ်း ချဉ်ချဉ်ငံငံစပ်စပ်လေး သုပ်စားမယ်
လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ သံပုရာသီးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံအချို့